အဖေများနေ့မှာ ယောင်းတို့ဖေဖေကို လက်ဆောင်ပေးသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (၅) မျိုး - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ… အဖေတွေက သမီးတွေကိုဆိုရင် သည်းသည်းလှုပ် အချစ်ပိုတတ်ကြတာရော။ပိုလွန်းသဲလွန်းလို့တောင် အမေတွေက တားယူရတဲ့အထိပါပဲ။ “အဖေများနေ့” ကလည်းနီးကပ်လာပြီဆိုတော့ တုန်နေအောင်ချစ်တတ်တဲ့ ယောင်းတို့ဖဖေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့ဦး ။ ဖေဖေ့ကို ဘယ်လိုလက်ဆောင် ပေးရပါ့မလဲဆိုပြီး အကြံအိုက်နေရင်တော့ ဒါလေးတွေ ပေးကြည့်ပါနော်…...
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ဖေဖေ့အတွက် ရှပ်အင်္ကျီ ကောင်းကောင်းလေးတစ်ထည် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင် ကျိန်းသေအသုံးဝင်မှာပါ ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဆို ချည်နဲ့ လီနင်လို အသားအေးအေး ရှပ်အင်္ကျီမျိုးက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ အရောင်ကတော့ ဖေဖေ့အကြိုက်ကို ယောင်းသာ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။
တကယ်လို့ ယောင်းဖေဖေက သက်တောင့်သက်သာနေရတာ ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် ပုဆိုးဝယ်ပေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ပုဆိုးကိုမှ ချည်ပုဆိုး ၊ပိုးပုဆိုးစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကမှ နေ့စဉ်ဝတ်ဖို့ဆို ချည်ပုဆိုးက အဆင်ပြေပြီး ပွဲနေပွဲထိုင်ဆို ပိုးပုဆိုးကို ရွေးသင့်ပါတယ်။
Related article >>> သူများမေမေ နှင့် ကျွန်မမေမေ
စမတ်ကျကျဖေဖေဆိုရင် ခါးပတ်ကမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ခါးပတ်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အစားစားရှိတာမို့ ယောင်းတို့ဘတ်ဂျက်နဲ့ တွက်ချက်ပြီး ဖေဖေ့ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။
Women of Tomorrow II – https://www.facebook.com/events/307042173562875/
ဖေဖေတွေ အပြင်ထွက်တိုင်း မပါမဖြစ်က ပိုက်ဆံအိတ်ဆိုတာ သတိထားမိတယ်ဟုတ်? ပိုက်ဆံအပြင် ကဒ်တွေပါထည့်လို့ရမယ့် ပိုက်ဆံအိတ်မျိုးဆို ဖေဖေ့အတွက် ပိုအဆင်ပြေစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လယ်သာပိုက်ဆံအိတ်ကို ရွေးမယ်ဆိုရင် တချို့လယ်သာတွေက ကွာတတ်တာမို့ သေချာလေးရွေးဖို့တော့ လိုပါမယ်။
Related article >>> ကလေးတွေကို လိင်ပညာပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး(၅)ခု
ယောကျာ်းလေးတိုင်း နာရီကို သဘောကျကြပါတယ်။ ယောင်းရဲ့ဖေဖေအပါအဝင်ပေါ့။ နာရီဆိုတာ ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့ သက္ကရာဇ်ကင်း အဆင်တန်ဆာတစ်ခုပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ နာရီအများစုက ဈေးကြီးတတ်တာမို့ ဘတ်ဂျက်နဲ့ ကိုက်ရဲ့လားလို့ တစ်ချက်ပြန်တွက်ဖို့တော့ လိုအပ်တာပေါ့နော်။
ယောင်းရဲ့ဖေဖေကိုသာ ဒီလက်ဆောင်လေးတွေ ပေးမယ်ဆိုရင် ဖေဖေ့စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကြည်နူးပီတိ ဖြစ်သွားမယ်လို့အာမခံပါတယ်။“Happy Father’s Day” လ်ို့ပြောဖို့လည်းမမေ့နဲ့ဦးနော်။
ယောငျးတို့ရေ… အဖတှေကေ သမီးတှကေိုဆိုရငျ သညျးသညျးလှုပျ အခဈြပိုတတျကွတာရော။ပိုလှနျးသဲလှနျးလို့တောငျ အမတှေကေ တားယူရတဲ့အထိပါပဲ။ “အဖမြေားနေ့” ကလညျးနီးကပျလာပွီဆိုတော့ တုနျနအေောငျခဈြတတျတဲ့ ယောငျးတို့ဖဖေကေို လကျဆောငျပေးဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့ဦး ။ ဖဖေကေို့ ဘယျလိုလကျဆောငျ ပေးရပါ့မလဲဆိုပွီး အကွံအိုကျနရေငျတော့ ဒါလေးတှေ ပေးကွညျ့ပါနျော…...
နစေ့ဉျနဲ့အမြှ အပွငျထှကျအလုပျလုပျနရေတဲ့ ဖဖေအေ့တှကျ ရှပျအင်ျကြီ ကောငျးကောငျးလေးတဈထညျ လကျဆောငျပေးလိုကျရငျ ကြိနျးသအေသုံးဝငျမှာပါ ။ မွနျမာပွညျရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဆို ခညျြနဲ့ လီနငျလို အသားအေးအေး ရှပျအင်ျကြီမြိုးက ပိုသငျ့တျောပါတယျ။ အရောငျကတော့ ဖဖေအေ့ကွိုကျကို ယောငျးသာ အသိဆုံးဖွဈမှာပါ။
တကယျလို့ ယောငျးဖဖေကေ သကျတောငျ့သကျသာနရေတာ ကွိုကျတဲ့သူဆိုရငျ ပုဆိုးဝယျပေးတာက အကောငျးဆုံးပါ။ ပုဆိုးကိုမှ ခညျြပုဆိုး ၊ပိုးပုဆိုးစသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးရှိတဲ့ထဲကမှ နစေ့ဉျဝတျဖို့ဆို ခညျြပုဆိုးက အဆငျပွပွေီး ပှဲနပှေဲထိုငျဆို ပိုးပုဆိုးကို ရှေးသငျ့ပါတယျ။
Related article >>> သူမြားမမေေ နှငျ့ ကြှနျမမမေေ
စမတျကကြဖြဖေဆေိုရငျ ခါးပတျကမရှိမဖွဈပါပဲ။ ခါးပတျရဲ့ဈေးနှုနျးတှကေတော့ အစားစားရှိတာမို့ ယောငျးတို့ဘတျဂကျြနဲ့ တှကျခကျြပွီး ဖဖေကေို့ လကျဆောငျပေးလိုကျပါ။
ဖဖေတှေေ အပွငျထှကျတိုငျး မပါမဖွဈက ပိုကျဆံအိတျဆိုတာ သတိထားမိတယျဟုတျ? ပိုကျဆံအပွငျ ကဒျတှပေါထညျ့လို့ရမယျ့ ပိုကျဆံအိတျမြိုးဆို ဖဖေအေ့တှကျ ပိုအဆငျပွစေမှော အမှနျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ လယျသာပိုကျဆံအိတျကို ရှေးမယျဆိုရငျ တခြို့လယျသာတှကေ ကှာတတျတာမို့ သခြောလေးရှေးဖို့တော့ လိုပါမယျ။
Related article >>> ကလေးတှကေို လိငျပညာပေးခွငျးကွောငျ့ ရရှိလာနိုငျမယျ့ အကြိုးကြေးဇူး(၅)ခု
ယောကျြားလေးတိုငျး နာရီကို သဘောကကြွပါတယျ။ ယောငျးရဲ့ဖဖေအေပါအဝငျပေါ့။ နာရီဆိုတာ ဘယျတော့မှမရိုးနိုငျတဲ့ သက်ကရာဇျကငျး အဆငျတနျဆာတဈခုပဲလေ။ ဒါပမေဲ့ နာရီအမြားစုက ဈေးကွီးတတျတာမို့ ဘတျဂကျြနဲ့ ကိုကျရဲ့လားလို့ တဈခကျြပွနျတှကျဖို့တော့ လိုအပျတာပေါ့နျော။
ယောငျးရဲ့ဖဖေကေိုသာ ဒီလကျဆောငျလေးတှေ ပေးမယျဆိုရငျ ဖဖေစေိ့တျထဲမှာ အရမျးကွညျနူးပီတိ ဖွဈသှားမယျလို့အာမခံပါတယျ။“Happy Father’s Day” လို့ပွောဖို့လညျးမမနေဲ့ဦးနျော။
Tags: Dad, Family, Father, Father’s Day, gift, love, present, Relationship
iKON အဖွဲ့ကနေ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကင်ဟန်ဘင်း တစ်ယောက် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုကြောင့် နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာဟု သတင်းရရှိ